Kubudirira mune zvedzidzo, kushushikana, kurudziro uye kutarisisa: chii chakakosha kuita zvakanaka muchikoro? - Kudzidziswa kwekuziva
Unyanzvi hwezvidzidzo hunogona kubatsira zvakanyanya mukukwanisa kutsvaga basa, kugadzirisa mamiriro emari uye kuwana danho repamusoro redzidzo. Pakati pehunyanzvi hwekuchikoro, kuverenga uye masvomhu ndidzo dzinobata panenge pamatanho ese ehupenyu hwemudzidzi. Ongororo dzinoverengeka dzakaedza kuona misiyano ine chekuita nekubudirira munzvimbo mbiri idzi.
Mune ongororo ichangoburwa, Geary nevamwe vake (2020)  akaongorora hukama pakati pezvakasiyana siyana uye kuverenga uye hunyanzvi hwemathematics muboka revadzidzi vegiredhi rechitatu nerechitatu. Vese vatori vechikamu vakaongororwa kuburikidza:
IQ bvunzo (Raven matrices uye mazwi)
Miedzo ine chekuita nekuverenga uye masvomhu (manhamba mashandiro uye bvunzo dzekuverenga)
Dzimwe bvunzo dzekuziva (span yemadhijiti, runyorwa rwemazwi ekuisa mumusoro, Courses bvunzo)
Zvakare, kudzidza kukurudzira (fungidziro yekukosha kwemisoro ichadzidzwa), kushushikana kune masvomhu uye maitiro ekutarisisa kwakaongororwa.
Njere (pamwe chete nekushanda memory) zvakaguma iyo paramende yekufungidzira kumhanya uye kururamisa kwekuverenga uye hunyanzvi hwemasvomhu. Hunhu hwekutarisisa, kune rumwe rutivi, hunoratidzika kunge hune basa rakakosha musvomhu pane kuverenga. Kusava nehanya, mukuita, kunogona kukonzeresa kunonoka kudzidza kwe math. Imwe fungidziro iyo vanyori vakauya mushure mekuongorora iyo data ndeyekuti kugona kwenzvimbo kunogona kusimudzira kushanda kwemasvomhu kudzidza; uyezve, visuospatial bvunzo (senge yeCorsi bvunzo) inogona kubatsira kunzwisisa mutsauko mukubudirira kwesvomhu pakati pevana vakasiyana. Chirevo-chenguva pfupi ndangariro chakazove choga chinongedzo chine chekuita nekuverenga (kururamisa uye kumhanya), asi kwete kune masvomhu.
Unyanzvi hwekuziva, kutarisisa mukirasi uye kufarira kwenyaya muchidzidzo zvinoita kunge zvine hukama. Kune rimwe divi, kushomeka kwekutarisirwa kunogona kukonzerwa nenyaya yekuti iye mudzidzi ane matambudziko echikoro nekukurumidza kana gare gare anorasa kufarira chidzidzo; uyezve, vadzidzi vane hukuru hwekuziva kugona vanodyara nguva yakawanda mukudzidza kuchikoro nekuti vane matambudziko mashoma. Kubva pane ino maonero, zvakafanira kuita kuti zvidzidzo zvinakidze uye zvive nyore kunzwisisa kuchengetedza vadzidzi kutarisisa; Izvo zvakawanikwa kuti vadzidzi vane ese ari maviri masvomhu uye kuverenga kunetsekana vane yakanyanya njodzi yekuona matambudziko edzidzo uye emabasa muhupenyu hwavo hwese.
Kune misiyano yakawanda inogona kuenderana nematambudziko edzidzo (senge nharaunda inogara munhu, nezvimwewo). Kunyangwe paine zvipingamupinyi izvi, chidzidzo ichi chinovhura mikana mitsva yekutsvagisa nzwisiso yezvinetso zvedzidzo kupfuura humbowo hwakareruka hune chekuita nekudzidza kuchikoro.
Geary David C., Hoard Mary K., Nugent Lara, alnal Zehra E., Scofield John E., Comorbid Kudzidza Matambudziko Mukuverenga neMathematics: Basa reUngwaru uye Mukati-Mukirasi Kutarisisa Maitiro, Miganhu muPsychology, 11: 3138, 2020
Attenzione, kuverenga, masvomhu, kurudziro, kubudirira muzvidzidzo
Kubudirira mune zvedzidzo, kushushikana, kurudziro uye kutarisisa: chii chakakosha kuita zvakanaka muchikoro?2020-12-212020-12-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/boys-286245_1280.jpg200px200px
Kuongorora kunetseka uye mhedzisiro yachoKudzidza, Zvinyorwa, Maitiro, Maitiro Ekudzidza